यौन तथा प्रजनन् – Page3– JanaSanchar.com
जानी राखौं, महिलाहरु को यौन इच्छा तिब्र हुदा देखाउने यी ४ इशारा
यो सत्य हो कि महिलाहरुलाई बुझ्न अप्ठेरो छ ।, तर जब आफ्नो भावना र इनर फिलिंग (भित्रि इच्छा) व्यक्त गर्ने कुरा गर्छन तर त्यहाँ शब्दहरुको सट्टा नन भर्बल कम्यूनिकेशन अर्थात इशाराको प्रयोग गर्छन् । यस्तो बेला पुरुषका लागि यो सांकेतिक क्रियाकलाप बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यस्तोमा महिलाहरुको बडी ल्याग्वेज (शारीरिक हाउभाउ)का केही संकेतहरु जान्नु जरुरी..
आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमानलाई ताक्छन् ?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक रुपमा विभिन्न समस्याहरु निम्तिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । श्रीमान विदेशमा रहेको मौकामा महिलाहरु परपुरुषसँग लागेका थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमानलाई ताक्छन् अर्थात परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्छन् ? यसका विषयमा गहन अध्ययनको जरुरत छ । तर, जापानमा..
धेरै सेक्स गर्ने महिला बढी बुद्धीमानी !
एजेन्सी । महिलाहरुले अत्याधिक अर्थात धेरै पटक सेक्स गरेमा स्मरण शक्ति बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । क्यानाडाको म्याकगल विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार धेरै सेक्सले महिलाहरुमा शब्द सम्झिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने गरेको पाइएको हो । यस अध्ययनमा १८ देखि २९ बर्ष उमेरका ७८ जना महिलाको शबद चयन र अनुहारको आधारमा कम्युटर मेमोरी..
स्वप्न दोषः कसरी छुटकारा पाउने ?
किशोरवस्थामा हुने विभिन्न शारीरिक परिवर्तन र यौनिक प्रक्रिया चिन्ताको बिषय बन्ने गर्छ । किशोरहरु यौनका सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदैनन् । उनीहरुभित्र अनेकन जिज्ञासा गुम्सिएर रहेको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो शारीरिक परिवर्तनलाई समेत उनीहरु सहज रुपमा आत्मसात गरिरहेका हुँदैनन् । किशोरवयमा स्वप्न दोष हुनसक्छ, यो सामन्य हो । अक्सर किशोर यहिं..
सेक्समा चरम सुखको राज के हो ?
अलग अलग यौन रुझान भएका महिलाहरुमा चरमोत्कर्ष तथा अर्गेज्मको स्तर भिन्न हुन्छ । कुनै पुरुष वा समलिंगी तथा द्धिलिंगी मानिसको तुलनामा एक सामान्य महिला सेक्समा कम मात्रामै चरमोत्कर्षमा पुुग्न सक्दछन् । यो तथ्य अमेरिकामा ५२ हजार ६ सय मानिसमा गरिएको एक अध्ययनबाट पुष्टि भएको हो । द्धिलिंगी अर्थात् बाइसेक्सुअल भनेका ती मानिस हुन् जसले महिला..
फेसबुकबाटै यौन धन्दा सञ्चालन गर्ने दुई युवक पक्राउ परे
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले टाढा रहेका एकअर्कालाई भचुअल दुनियाँमा जोडेको छ । यसबाट धेरैले लाभ पनि लिएका छन् ।तर, कतिलाई हैरानी दिन थालेको छ । विषेश गरेर फेसबुकको दुरुपयोग गरेर अश्लिल धन्दा चलाउनेहरुका कारण युवतीहरु पीडित हुने गरेका छन् ।महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हालै एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ, जसले फेसबुक पेज नै खोलेर यौन धन्दा..
राती नांगै सुत्नुका फाइदा कती ? जानी राखाै !
सुत्ने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । कोही कपडा लगाएर सुत्छन् भने कोही कपडा नलगाई । एक अनुमानअनुसार १० प्रतिशत मानिसहरु नाङगै सुत्छन् । तिनीहरुले वास्तवमै सही गरेका हुन्, किनभने विना कपडा सुत्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि छ । के–के छन् त फाइदा ? पढ्नुहोस् : १. पार्टनरसंग नाङगै सुत्दा छालाको प्रत्यक्षसम्पर्कले अक्सिटोसिन हर्मोन..
के-के हुन् छुन नहुने शरीरका यी ६ अंग जानी राखौ…
हाम्रो शरीरका केही यस्ता अंग छन्, जसलाई छुनु हुँदैन, तर हामी छोइदिन्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, यी अंग छोएका कारण हाम्रो शरीरभित्र ब्याक्टेरिया छिर्ने र बिरामी बनाउँछ ? जान्नुहोस् ती अंगका बारेमा:- मुख – मुखको माध्यमबाट सजिलै शरीरभित्र ब्याक्टेरिया पस्ने हुन्छ । त्यसैले, औलाहरुलाई बारम्बार मुख वा ओठमा लाने काम नगर्नुहोस् । काखी – काखीमा..
आफ्नो जीवनसाथी वा प्रेमि-प्रेमिकासँग कहिल्यै नभन्नुस् यी ६ कुरा
पति-पत्नीबीचको सम्बन्धमा टकराव आउनेमात्रै नभएर डिभोर्स नै हुनेसम्मका घटनामा निकै वृद्धि भएका छन् । यतिमात्रै होइन, प्रेमी-प्रेमिकाबीच ब्रेकअपको दर पनि बढ्दो छ । सम्बन्ध टुट्नुमा कुनै गम्भीर र ठूला कारणमात्रै नभएर स-साना असावधानीले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । आउनुस्, आज हामी आफ्नो प्रेमि-प्रेमिका वा पति-पत्नीलाई भन्नै नहुने ६ कुरा..
घरमा एक्लै हुँदा यस्तो हर्कत प्रस्तुत गर्छन् यी केटीहरु !
एजेन्सी । हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं ? टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ? यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् उनीहरु आफूलाई मिनी फेशनका रुपमा लिन्छन् । आफूले पछिल्लो समय किनेका नयाँ-नयाँ..